စတွေ့တွေ့ချင်း လူတစ်ယောက်နဲ့ ချက်ချင်းကို ရင်းနှီးသွားအောင် ဘယ်လို လုပ်ကြမလဲ? - For her Myanmar
တုံဏှိဘာဝေတော့ နေလို့မရတာ သိတယ်ဟုတ်?
မျက်နှာမြင်ချစ်ခင်ပါစေ အသံကြားသနားပါစေ ဘာညာသာရကာတွေက ပုံပြင်ထဲမှာပဲရှိတော့တာပါယောင်းရေ.. တကယ့်လက်တွေ့မှာက စတွေ့တွေ့ချင်း ချစ်ခင်စိတ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာမျိုးက မရှိသလောက်ကို ရှားပါတယ်။ တစ်ကြိမ်တစ်ခါမှ မတွေ့မမြင်ဖူးတဲ့ သူစိမ်းနှစ်ယောက်တို့တွေ့ဆုံကြပြီဆိုတာနဲ့ အပြန်အလှန်အကဲခတ်မှုတွေနဲ့ သူကဘာလဲ ဘယ်လိုလူမျိုးလဲဆိုတာကို ဦးစွာပထမ ကောက်ချက်ချတတ်တာပါ။ ဒီတော့ စစတွေ့တဲ့အချိန်အခါမှာ ရင်းနှီးခင်မင်မှုတွေရရှိလာအောင် ဘယ်လိုတွေပြုမူရမလဲဆိုတဲ့ နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို မင်မင်ကဝေမျှပေးမယ်နော်။
ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရမယ့်လူတစ်ယောက်ကို စတွေ့တွေ့ချင်း ရုပ်တည်ကြီးနဲ့ ခပ်ချေချေနေရင်တော့ ယောင်းကိုခင်မင်လာပါလိမ့်မယ် အားကြီးကြီး ဟုတ်တယ်ဟုတ်? ဒါကြောင့် ယောင်းအနေနဲ့ သူနဲ့တွေ့ဆုံရတာကို လိုလားကြောင်းကို ပြတဲ့အနေနဲ့ ပြုံးပြီး နှုတ်ဆက်ပါ။ ယောင်းဘက်ကပြုံးပြလိုက်ရင်တော့ တစ်ဖက်လူက ပြန်မပြုံးဘဲတော့ မနေပါဘူး။ ယောင်းတို့အပြန်အလှန်ပြုံးပြရင်း တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မြင်ဖူးသွားပြီ သိသွားပြီဆိုတဲ့ အဓိပ္ပာယ်သက်ရောက်သွားပြီမို့ ယောင်းတို့ခင်မင်ဖို့ လမ်းစပွင့်သွားပါပြီ။
Related article>>>ရိုးရိုးခင်တတ်တဲ့လူနဲ့ အီစီကလီလုပ်တတ်တဲ့လူကြားက ကွာခြားချက်
ယောင်းတို့အလုပ်နဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဆုံတွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာ တစ်ယောက်အကြောင်းတစ်ယောက်တော့ အပြန်အလှန် မိတ်ဆက်ရမှာပဲလေ။ ဒီလိုမိတ်ဆက်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကျွန်မကတော့ ဘယ်ကဘယ်သူဆိုတာမျိုးတွေထက် ကျွန်မကိုတော့ ရင်းရင်းနှီးနှီး ဒီလို နာမည်အတိုနဲ့ ခေါ်လို့ရပါတယ်၊ ကျွန်မကတော့ လက်ရှ်ိဒါတွေလုပ်နေတာဆိုတော့ ဆက်စပ်ပြီး အကူအညီလိုရင် ပြောလို့ရနိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့ ကြိုဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကို သုံးနှုန်းပေးသင့်ပါတယ်။
ယောင်းတို့စတွေ့တဲ့ တစ်ဖက်လူက ယောင်းထက်အသက်ငယ်တာပဲဖြစ်စေ၊ ကြီးတာပဲဖြစ်စေ၊ ယောင်းအနေနဲ့ အပြန်အလှန်လေးစားမှုကိုတော့ ပြသပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်။ အိုဗာတင်းတွေလုပ်ပြဖို့ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး ယောင်းရေ။ တစ်ဖက်လူပြောတာကို လေးလေးနက်နက်အာရုံစိုက် နားထောင်ပေးပြီး ပြန်လည်ဆွေးနွေးပေးရမှာပါ။ ကိုယ့်ကိုအလေးထားတဲ့လူဆိုရင်တော့ လူတိုင်းလိုလိုသဘောကျတတ်တာမို့ ဒီအချက်လေးက ယောင်းတို့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့ ချက်ကောင်းတစ်ခုပါပဲ။
Related artilce>>>သူငယ်ချင်းများ ရည်းစားရပြီးနောက် ဖြစ်သွားတတ်သော အချိုး(၅)မျိုး
စတွေ့တွေ့ချင်း သူ့ဘက်ကတော့ ငါဘာတွေရနိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ အစပျိုးမယ်ဆိုရင် ဘယ်ကောင်းမလဲနော်… ယောင်းဘက်က အရင်ပေးနိုင်တာမျိုးတွေနဲ့ အစပြုတာက ယောင်းအတွက် impression ကောင်းကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ ပေးဆပ်ပါဆိုလို့ ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကြီးတွေကို ဆိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး ယောင်းရေ… စတွေ့ချိန်မုန့်စားလို့ ယောင်းဘက်က ဦးအောင်ရှင်းပေးလိုက်တာမျိုး ။ သူ့ဘက်ကတော့ ဘယ်လိုဆိုတာမျိုး တွေးမနေဘဲ ယောင်းဘက်ကနေ ဘာတွေကိုတော့ ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုပြီး လမ်းခင်းပေးမယ်ဆိုရင် ယောင်းတို့အချင်းချင်းခင်မင်ရင်းနှီးမှုတွေ ရရှိလာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကဲ… ဒီအချက်လေးတွေအတိုင်း ကျင့်သုံးမယ်ဆိုရင်တော့ ယောင်းကခင်မင်လွယ်တဲ့ လူမှုဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်လာနိုင်မှာပါယောင်းရေ။ သူစိမ်းတစ်ယောက်နဲ့ ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ဖို့လိုအပ်လာတိုင်း ဒီအချက်လေးတွေကို သတိရမယ်ဆိုရင်တော့ဖြင့် ယောင်းတို့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးဟာ ကောင်းသည်ထက်ကို ကောင်းလာတော့မှာ ကျိန်းသေပါပဲ။
တုံဏှိဘာဝတေော့ နလေို့မရတာ သိတယျဟုတျ?
မကျြနှာမွငျခဈြခငျပါစေ အသံကွားသနားပါစေ ဘာညာသာရကာတှကေ ပုံပွငျထဲမှာပဲရှိတော့တာပါယောငျးရေ.. တကယျ့လကျတှမှေ့ာက စတှတှေ့ခေ့ငျြး ခဈြခငျစိတျဖွဈတယျဆိုတာမြိုးက မရှိသလောကျကို ရှားပါတယျ။ တဈကွိမျတဈခါမှ မတှမေ့မွငျဖူးတဲ့ သူစိမျးနှဈယောကျတို့တှဆေုံ့ကွပွီဆိုတာနဲ့ အပွနျအလှနျအကဲခတျမှုတှနေဲ့ သူကဘာလဲ ဘယျလိုလူမြိုးလဲဆိုတာကို ဦးစှာပထမ ကောကျခကျြခတြတျတာပါ။ ဒီတော့ စစတှတေဲ့အခြိနျအခါမှာ ရငျးနှီးခငျမငျမှုတှရေရှိလာအောငျ ဘယျလိုတှပွေုမူရမလဲဆိုတဲ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို မငျမငျကဝမြှေပေးမယျနျော။
ကိုယျနဲ့ပတျသကျဆကျနှယျရမယျ့လူတဈယောကျကို စတှတှေ့ခေ့ငျြး ရုပျတညျကွီးနဲ့ ခပျခခြေနြေရေငျတော့ ယောငျးကိုခငျမငျလာပါလိမျ့မယျ အားကွီးကွီး ဟုတျတယျဟုတျ? ဒါကွောငျ့ ယောငျးအနနေဲ့ သူနဲ့တှဆေုံ့ရတာကို လိုလားကွောငျးကို ပွတဲ့အနနေဲ့ ပွုံးပွီး နှုတျဆကျပါ။ ယောငျးဘကျကပွုံးပွလိုကျရငျတော့ တဈဖကျလူက ပွနျမပွုံးဘဲတော့ မနပေါဘူး။ ယောငျးတို့အပွနျအလှနျပွုံးပွရငျး တဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မွငျဖူးသှားပွီ သိသှားပွီဆိုတဲ့ အဓိပ်ပာယျသကျရောကျသှားပွီမို့ ယောငျးတို့ခငျမငျဖို့ လမျးစပှငျ့သှားပါပွီ။
Related article>>>ရိုးရိုးခငျတတျတဲ့လူနဲ့ အီစီကလီလုပျတတျတဲ့လူကွားက ကှာခွားခကျြ
ယောငျးတို့အလုပျနဲ့ပဲဖွဈဖွဈ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ပဲဖွဈဖွဈ ဆုံတှတေဲ့အခါမြိုးမှာ တဈယောကျအကွောငျးတဈယောကျတော့ အပွနျအလှနျ မိတျဆကျရမှာပဲလေ။ ဒီလိုမိတျဆကျတဲ့အခါမြိုးမှာ ကြှနျမကတော့ ဘယျကဘယျသူဆိုတာမြိုးတှထေကျ ကြှနျမကိုတော့ ရငျးရငျးနှီးနှီး ဒီလို နာမညျအတိုနဲ့ ချေါလို့ရပါတယျ၊ ကြှနျမကတော့ လကျရှိဒါတှလေုပျနတောဆိုတော့ ဆကျစပျပွီး အကူအညီလိုရငျ ပွောလို့ရနိုငျပါတယျဆိုတဲ့ ကွိုဆိုတဲ့စကားလုံးတှကေို သုံးနှုနျးပေးသငျ့ပါတယျ။
ယောငျးတို့စတှတေဲ့ တဈဖကျလူက ယောငျးထကျအသကျငယျတာပဲဖွဈစေ၊ ကွီးတာပဲဖွဈစေ၊ ယောငျးအနနေဲ့ အပွနျအလှနျလေးစားမှုကိုတော့ ပွသပေးဖို့လိုအပျပါတယျနျော။ အိုဗာတငျးတှလေုပျပွဖို့ပွောတာမဟုတျပါဘူး ယောငျးရေ။ တဈဖကျလူပွောတာကို လေးလေးနကျနကျအာရုံစိုကျ နားထောငျပေးပွီး ပွနျလညျဆှေးနှေးပေးရမှာပါ။ ကိုယျ့ကိုအလေးထားတဲ့လူဆိုရငျတော့ လူတိုငျးလိုလိုသဘောကတြတျတာမို့ ဒီအခကျြလေးက ယောငျးတို့ရငျးနှီးကြှမျးဝငျဖို့ ခကျြကောငျးတဈခုပါပဲ။
Related artilce>>>သူငယျခငျြးမြား ရညျးစားရပွီးနောကျ ဖွဈသှားတတျသော အခြိုး(၅)မြိုး
စတှတှေ့ခေ့ငျြး သူ့ဘကျကတော့ ငါဘာတှရေနိုငျတယျဆိုတာမြိုးနဲ့ အစပြိုးမယျဆိုရငျ ဘယျကောငျးမလဲနျော… ယောငျးဘကျက အရငျပေးနိုငျတာမြိုးတှနေဲ့ အစပွုတာက ယောငျးအတှကျ impression ကောငျးကောငျးရနိုငျပါတယျ။ ပေးဆပျပါဆိုလို့ ကွီးကွီးကယျြကယျြကွီးတှကေို ဆိုလိုခငျြတာမဟုတျပါဘူး ယောငျးရေ… စတှခြေိ့နျမုနျ့စားလို့ ယောငျးဘကျက ဦးအောငျရှငျးပေးလိုကျတာမြိုး ။ သူ့ဘကျကတော့ ဘယျလိုဆိုတာမြိုး တှေးမနဘေဲ ယောငျးဘကျကနေ ဘာတှကေိုတော့ ကူညီပေးနိုငျတယျဆိုပွီး လမျးခငျးပေးမယျဆိုရငျ ယောငျးတို့အခငျြးခငျြးခငျမငျရငျးနှီးမှုတှေ ရရှိလာနိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
ကဲ… ဒီအခကျြလေးတှအေတိုငျး ကငျြ့သုံးမယျဆိုရငျတော့ ယောငျးကခငျမငျလှယျတဲ့ လူမှုဆကျဆံရေးကောငျးမှနျသူတဈယောကျဖွဈလာနိုငျမှာပါယောငျးရေ။ သူစိမျးတဈယောကျနဲ့ ရငျးနှီးကြှမျးဝငျဖို့လိုအပျလာတိုငျး ဒီအခကျြလေးတှကေို သတိရမယျဆိုရငျတော့ဖွငျ့ ယောငျးတို့ ပေါငျးသငျးဆကျဆံရေးဟာ ကောငျးသညျထကျကို ကောငျးလာတော့မှာ ကြိနျးသပေါပဲ။
Tags: Concentration, first time meeting, friend, Friendship, smile, Warm
Christina Rosy May 2, 2019